Ukuthetha ngobudlelwane obungewona bendabuko phakathi kweenkwenkwezi zezoshishino zezorhwebo zasekhaya akupheli. Ukususela ngamaxesha, umntu osuka kwisihlwele se-stellar uxhaphaza iindlebe malunga neengcamango ezingavumelekiyo kwiimpawu zentsapho, kodwa akukho mculi waseRussia uye wavuma ngokuvulekileyo kwi-orientation yakhe engavamile.
Ukuzalwa kwabantwana abavela kumama osondelene noFilip Kirkorov, uMaxim Galkin kunye noSergei Lazarev kwabaninzi ababibabikho bunye ubungqina obungqalileyo bokuba ebomini balaba balala beenkwenkwezi akukho ndawo yobudlelwane bemveli. Kwaye ukuba uGalkin ubuncinane betshatile, ngoko iKirikorov neLazarev sele bepapashwe ngaphandle kwamantombazana abo (iDudryavtseva kunye neLazaruv yaqala ukuba ngumhlobo kuphela).
Mhlawumbi, ukuba eRashiya kwakukho isimo sengqondo sokubekezela kubantu abanobugcisa bendabuko obungengokwesiko, iinkwenkwezi zezintlu ziye zayeka ukufihla ngokucacileyo ...
UFilip Kirkorov waba nomdla kumyeni kaRicky Martin
Umculi waseLatin waseMerika uRicky Martin uyisithixo seenkwenkwezi ezininzi zasekhaya. Nangona kunjalo, akuyena wonke umntu ovuyayo ngobomi bomntu obuhle bumnandi obumnandi. UMartin unabantwana ababini ovela kumama odandul 'umfazi, kwaye kungekude kakhulu watshata ngokusemthethweni wakhe owakhethiweyo uJvane Josef.
Abasebenzisi abasebenzisa intanethi abathobekileyo bafumanisa ukuba uRicky othandekayo unomdla waseRashiya. UFilip Kirkorov ulandelelana ngokucacileyo ubomi bomntu wabini esitshatileyo kwaye rhoqo "bathanda" iifoto zabo ezihlangeneyo kwi-Instagram. Ngoko, phantsi kwefoto, apho uRicky Martin noJvan Yosef batyhwatywa khona ngokulala emgodini, uFilip Kirkorov washiya amazwana anentsingiselo:
Kubonakala ukuba, ukumkani weentlobo zezilwanyana zasemakhaya akazange alindele ukuba ukuphawula kwakhe kungabangela enye ingxube yeengxoxo zesicatshulwa esithi:
U-Phil yena ngokwakhe unjalo
nona__999_ andinakuyichasa, iFlaka .. ", yaqatshelwa"))) nayo ibhaliweyo ebhaliweyo. Andikhathalele oko kwakusele kukhanya
iamkami__ Akusaqinisekanga kwakhona - heyuga!
I-nastasianikol Ifayile ibonakala njengekosi yokuhamba ngevili
lenskaya26 "eli libala"
I-Strelitz ayizange isondele kakhulu kukungaphumeleli
fideliston Ndiyakucinga ukuba uFilka ngokwakhe angathanda ukulayisha ezo zifoto 🤣 kodwa iinkwenkwezi zethu azikwazi ukuzithengisa ...
Ngubani oza kuphumelela "iLizwi" ibonisa ixesha eli-5: izibikezelo zokuqala kunye nokudumala
U-Alyona Vodonaeva walahlekelwa isifuba esisihlanu sesayizi
UOlga Buzova noDmitry Taras baphula? Kubonakala ngathi ewe ...
Indlela yokuphumelela kwimisebenzi?
Ikhekhe elingenayo i-cranberries kunye ne-caramel
Ukusebenzisa ezimhlophe ngaphakathi
UMarshal Rosenberg, ulwimi lobomi, unxibelelwano olungenobundlobongela
Funchoza kunye nemifuno kunye nengulube
Okroshka ngaphandle kwamazambane